China L'Oreal Royal Golden Supplement Cream PR Fanomezana fonosana fanomezana sy mpamatsy | BXL
L'Oreal krema famenon-karena volamena PR PR Package
Eo am-piandohan'ny fanombohana ity vokatra ity dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ireo olo-malaza, ka ny zavatra voalohany tokony hodinihina rehefa mamolavola ilay fonosana dia ny fomba hisarihana sy hahasarika ireo mpampiasa amin'ny fahitana sy ny fahalalam-pomba ary hanasongadinana ny vidin'ny vokatra.
Araka ny fitakian'ny mpanjifa ary mifototra amin'ny sanda marika, ny BXL Creative dia nanangana ekipa serivisy ho an'ny L'Oreal ary nanidina tany Shanghai imbetsaka hanao seminera miaraka amin'ny mpanjifa. Izy ireo dia nitazona ny famoronana lalindalina an'ity vokatra ity, nifantoka tamin'ny fomba fijery telo: ny fihenan-tanana, ny tsy fitoviana ary ny refy.
Ny asa famolavolana fonosana tsara dia tokony hahatonga ny olona hikasika sy hividy. Miorina amin'ny lanjan'ireo olona avo lenta, ny mpamorona dia nanadio ireo teny fanalahidy famolavolana: fahatsapana avo lenta, fahatsapana kalitao, mahaliana, tsy manam-paharoa, mahafinaritra, vokatra aseho.
Ny vokatra lehibe an'ity boaty fanomezana PR ity, ny tavoahangy mini-tantely, dia mampiasa nectar sarobidy Manuka hanasongadinana maso ny lafiny fivarotana ny vokatra.
Ny asa famolavolana tena tsara dia tokony hazava tsara, ary ny fonosana anatiny sy ny fonosana ivelany dia tokony hozary araka ny tokony ho izy.
Ny endrik'ireo boaty ivelany dia nalaina tahaka avy amin'ny tranon-tantely, nanako sy nanasongadinana ireo toetra mampiavaka ny vokatra, mampitombo ny vokatra azo amin'ny antsipiriany, ary taratry ny firafitry ny vokatra voajanahary.
Ny fomban'ny lapa, ny loko volamena mamirapiratra, ny fonosana akorandriaka manjelanjelatra, ny tampon'ny boaty fanomezana dia misy antenaina andrasana. Ny atiny dia mandray vokatra lafo vidy sy famolavolana metika: lamina natao miaraka amin'ny tantely mitambatra miaraka amin'ny voninkazo sy tantely Manuka, atambatra amin'ny jiro ho an'ny vokatra fampisehoana tsara indrindra.
Manaraka: L'Oréal's Age Perfect deluxe skincare PR Giftet Packaging Design